မုံရွာဘက်ရောက်တုံး လက်ကမြင်းထားတာ (၂) | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Photography » မုံရွာဘက်ရောက်တုံး လက်ကမြင်းထားတာ (၂)	24
မုံရွာဘက်ရောက်တုံး လက်ကမြင်းထားတာ (၂)
Posted by ဘဲဥ on Jul 21, 2012 in Photography | 24 comments
ပင်လယ် ပျော် says: ညီလေးဥဥရေ ညီလေးအမခိုင်ကစိတ်ဇိုးနေတယ်ကွာ …ညီလေးကလျှောက်လည်တာသူ့ကို မစောင့်လို့တဲ့ကွာ.မနက်ဖြန်စစ်ကိုင်းသွားမယ် လိုက်ဦးမလား ……
မောင်ပေ says: ညီလေးအု
ကိုရင်မောင် says: ဟဲ့ ဘဲဥမရဲ့ ဟိုကျားပုံတွေနဲ့ ဆေးရုံကြီးဆိုလား..
Khaing Khaing says: ဟုတ်ပ ကျားပုံတွေနဲ့ရိုက်ထားတဲ့နေရာက စိတ်ဝင်စားစရာပဲဥဥ…….
ဘဲဥ says: အဲ့ဒီအကြောင်းလေးကို သေချာအောင်လေ့လာပီး ရေးပေးပါ့မယ် ကိုရင်မောင်ရေ့
အခုတော့ သိပ်မသိသေးဘူးဗျ ရမ်းတုတ်လို့လည်းကောင်းတာဟုတ်ဘူးလေ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 588
ဇောက် ထိုး says: အလွန့်အလွန် ကြည့်ရှုလို့ကောင်းပါတယ်။ ပညာကိုတော့ နားမလည်ဘူး။ မေတ္တာပို့ဖို့ပြောနေတဲ့ ရဟန္တာပုံက သဘာဝကျတယ်…အသက်ဝင်နေသလိုပဲ…ကျေးဇူး
manawphyulay says: မုံရွာကို ရောက်ဖူးသေးဘူးသိလား… လိုက်ပို့ပေးဦးနော် လာလည်ရင်…..
မဟာရာဇာ အံစာတုံး says: ဘဲဥ တစ်ယောက်
ခုတစ်လော စိတ်ကောင်းဝင်နေ၏ ..
ထို့ကြောင့် ပိုက်ပိုက် ချေးချင်ပါ၏ …
ချေးမလားဟင်င်င် … ဘဲဥ တစ်ယောက် တင်ပေးသော
ဘုရားများကိုလည်း အားပါးတရ ဖူးမြောက် ကြည်ညိုသွားပါ၏ ..
ဘဲဥ says: သများတောင် ဘိုင်နေတာတော်ရေ့
ဘယ်သူများ ပိုက်ပိုက်ချေးမလဲလို့ ပုံလေးတွေတင်ပေးနေတာ (ဖားတဲ့သဘောမျိုးလေး) :grin:
moemakha says: ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံးရပ်တော်မူဖြစ်တဲ့ လေးကျွန်းစင်္ကြာဘုရားကြီးကိုတော့ချန်ခဲ့တယ်ဗျာ
မဟာရာဇာ အံစာတုံး says: အကိုရေ ..
နံပါတ် ၁ ပို့စ်မှာ
ပါခဲ့ပြီးပါပြီ ခင်ဗျာ …
ဘဲဥ says: မချန်ပါဘူးဗျာ
ဖိုးထောင် says: (ဘဲဥမ ဒင်းက ငါ့ကို ဘုရားတရားသွယ်ဝိုက်ပြီး လုပ်ခိုင်းနေတယ်ပေါ့လေ တွေ့ဦးမယ်
ခလောက်ပြီးတော့ကို ရေဆိုးမြောင်းကထွက်တဲ့ဆီနဲ့ ကြော်ပလိုက်ဦးမယ်) စိတ်ထဲက အဲဒီလို…. အပြင်ကတော့ ဥဥရေ ဘုရားဖူးရတာကောင်းလိုက်တာကွာ သာဓုသာဓုသာဓု
ဘဲဥ says: ဗျို့ ဘဲဂျီး ထန်းတောသွားရင် သများကိုလည်းခေါ်အုံးလေ
ဒီမှာ အသံကြားရင်ကို သမာဓိပျက်နေဘီ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 56
ဗိုက်ကြီး says: ဖျား ဖျား ရိုက်ချက်တွေ ကောင်းလှချည်ရဲ့
ဂေါ်ဇီလာဥ ဆိုရင် လိုက်မှီတော့မှာ မဟုတ်ပါချေ ။
cherry nwe says: ဦးဘဲဥ သမီးက မုံရွာမရောက်ဘူးတော့ဦးဘဲဥပုံလေးဒွေပဲဘူးင်္သားလိုက်တယ်နော်ကျေးဇူးပါ၇ှင့်
water-melon says: တောင်မရေ အဲမှာ မျှော်စင်ကြီးရှိသေးလားအေ့
ဘဲဥ says: အိုတေ ကောင်မရေ့ ကြာသလားလို့
ပြောနေကြာတယ် အခုဘဲလူစုလိုက်ရအောင် :grin:
ညလေး says: အုအုလေးရယ်…….ဘုရားဖူးသွားတယ်နော်……
ဘဲဥ says: အားပေးကြတဲ့ ရွာသူ ရွာသားအပေါင်း သူတော်ကောင်းတွေကို ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ဗျာ …
ဘုဂလန့်် says: ဒါ့ပုံ ပညာကိုတော့ နားမလည်သေးဘူးဗျ
ကိုဘဲဥရဲ့ ပုံတွေကိုတော့ အားပေးသွားပါတယ်နော
ဘဲဥ says: ကျေးကျေးပါ ဘုဘုချင့်
အဟေးဟေး ဥဥနဲ့ ဘုဘု
mamanoyar says: ဥဥရေ
ဘဲဥ says: နောက်တစ်ခါဖူးချင်ရင် အူးအူးပေကို လိုက်ပို့ခိုင်းသိလား မမနိုရာ
အဲ့လူဂျီးဂ တဘောအားဂျီးကောင်းတာဒဲ့ (မိန်းကလေးတွေအပေါ်) ဟိဟိ